Go,aamadii ka Soo Baxay Shirweynihii JXSG Uga Socda Degmada Cadaadle – Rasaasa News
Shirwaynihii 31aad ee midawga jabhada xoraynta Soomaali Galbeed UWSLF oo ka furmay dagmada cadaadle ee G/Goday , 4/5/2010 socdayna ilaa 6 /5 /2010 ciwaankiisuna ahaa nabad, midnimo iyo horumar anaga oo ka
REF:UWSLF/211/10 DATE: 06/05/2010
Shirwaynihii 31aad ee midawga jabhada xoraynta Soomaali Galbeed UWSLF oo ka furmay dagmada cadaadle ee G/Goday , 4/5/2010 socdayna ilaa 6 /5 /2010 ciwaankiisuna ahaa nabad, midnimo iyo horumar anaga oo ka taabaqaadayna.
(وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل علي الله انه هو السميع العليم) الانفال
Wada hadal iyo fikir iswaeydaarsi dheer kadib waxaa lagu go;aansaday qodobadan soosocda:
1. Shir waynuhu wuxuu si buuxda u ogalaaday kuna tilmaamey mid taariikhi ah go,aankii geesinimada lahaa ee maamulka Golaha Fulinta ee UWSLF qaateen , kaas oo ahaa wada hadalkii ay kadhalatay xabad joojintu.
2. Shir waynaha ururku wuxuu go,aamiyey in halkii laga siiwado hanaankii wadaxaajoodka nabadeed ee UWSLF iyo Dawlada Fedaralka Ethiopia udhaxeeyey ilaa lagamidhadhaliyo.
3. wuxuu shir waynaha UWSLF go,aansadey si uu utaabogalo geedi socodka nabada in si buuxda oo niyad sami ah ula tashado shacab weynaha soomaaligalbeed una hogaansamo go,aamada kasoobaxidoona shirweynaha dhaxmari doona UWSLF & Madax dhaqameedyada ,culumaa’udiinka. aqoonyahanada , ganacsatada ,qurbo jooga iyo dhamaan qaybaha kaladuwan ee bulshada .
4. Ururku wuxuu go’aansaday soona dhawaynayaa wixii go’aamo ah oo ka soobaxa shir weynaha shacabka Somali galbeed.
1. Midawga Jabhada xoreyna S/galbeed waxay ugu baaqaysaa shacabka Somali galbeed ee ku nool dalka gudihiisa iyo dibadiisaba in ay midoobaan taageeraana geedi socodka nabadda.
2. Wuxuu shirwaynuhu soo dhaweeyay kuna bogaadinayaana go’aanka ka soobaxay Golaha sare ee ONLF ee ay kaga soo qayb galayaan geedi socodka nabada iyo horumarka wadanka
3. Sidoo kale ururku waxuu baaq u dirayaa garabka kale ee ONLF in ay ka soo gayb galaan geedi socodka nabadda una turaan shacabka tabaalaysan.
4. Ururku wuxuu ugu baaqayaa dhammaan shacabka S/galbeed in ay iscafiyaan gacmahana isqabsadaan.
MIDNIMO HORMAR NABAD
Maamulka Xafiiska Warbaahinta